Inona no Azoko Atao mba ho Ampy Torimaso Aho? | Manontany ny Tanora
HAMAKY AMIN'NY TENY Afrikaans Albaney Alemà Amharique Anglisy Arabo Arabo (Liban) Armenianina Azerbaijaney Bichlamar Boligara Catalan Cebuano Chichewa Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cinghalais Danoà Espaniola Estonianina Failandey Fidjianina Fon Frantsay Féroïen Ga Galoà Grika Géorgien Hebreo Hiligaynon Hindi Hindi (Romanina) Holandey Hongroà Iban Iloko Indonezianina Iokrenianina Islandey Isoko Italianina Japoney Kachin Kambôdzianina Kannada Kantôney Nentim-paharazana Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Koreanina Kreôla any Belize Kreôla any Seychelles Kroaty Kurde Kurmanji (Caucase) Kurde Kurmanji (Sirilika) Kwanyama Lingala Litoanianina Malagasy Malayalam Malezianina Maltais Mandarin Nentim-paharazana Mandarin Notsorina Masedonianina Myama Ndebele (Zimbabwe) Norvezianina Nzema Népali Oromo Ossète Ouzbek Ouzbek (Romanina) Pangasinan Papiamento (Aruba) Persianina Poloney Portogey (Brezila) Portogey (Portogaly) Romanianina Rosianina Sango Sepedi Serba (Sirilika) Serba (Soratra Romanina) Sesotho (Afrika Atsimo) Setswana Shona Sinoa Kantôney Notsorina Slovaky Slovenianina Soedoà Soundanais Swahili Tagalog Tailandey Tatar Tenin’ny Tanana Amerikanina Tenin’ny Tanana Brezilianina Tenin’ny Tanana Italianina Tenin’ny Tanana Venezoelianina Tenin’ny Tanan’ny avy any Ekoatera Tetun Dili Tigrigna Tiorka Tseky Tsonga Twi Tzotzil Télougou Valencienne Vietnamianina Yorobà
Ratsy ve ny naotinao tamin’ny matematika na tamin’ny taranja fanatanjahan-tena? Mety hieritreritra àry ianao hoe mila miezaka bebe kokoa. Mety hoe ilay ianao tsy ampy torimaso anefa no tena olana.
Nahoana no zava-dehibe ny hoe ampy torimaso?
Inona no mahatonga anao tsy ho ampy torimaso?
Milaza ny manam-pahaizana fa tokony hatory adiny valo hatramin’ny adiny folo ny tanora, amin’ny alina. Nahoana izany no tena ilaina?
Lasa marani-tsaina kokoa ianao. Misy milaza hoe hoatran’ny manome sakafo ho an’ny atidohanao ianao rehefa matory. Hahay kokoa ianao any am-pianarana rehefa ampy torimaso. Ankoatra izay, dia ho mora kokoa aminao ny handamina olana.
Ho falifaly kokoa ianao. Raha tsy ampy torimaso ny olona iray, dia mety halahelohelo, ho kivy be, ary tsy hahay hifandray amin’ny hafa. Mety hiovaova koa ny fihetseham-pony.
Hifantoka tsara ianao rehefa mitondra fiara. Ny tanora 16 ka hatramin’ny 24 taona no atahorana kokoa ho rendremana rehefa mitondra fiara, raha ampitahaina amin’ny olona 40 ka hatramin’ny 59 taona. Izany no mahatonga an’ireny tanora ireny hiharan-doza.
Ho salama kokoa ianao. Rehefa matory ianao, dia afaka manolo na manavao an’ireo sela simba ny vatanao. Tsy dia atahorana hatavy be, na ho voan’ny diabeta, na ho tapaka lalan-dra koa ianao raha ampy torimaso.
Azo ampiasaina tsara ny telefaonina rehefa feno ny bateriany. Mavitribitrika koa ianao rehefa ampy torimaso
Hitantsika teo fa tena mahasoa ny torimaso. Mbola betsaka anefa ny tanora tsy ampy torimaso. Hoy i Elaine, 16 taona:
“Nanontanian’ny mpampianatra anay izahay, tany am-pianarana, hoe amin’ny firy izahay no mandeha matory amin’ny alina. Ny ankamaroany namaly hoe amin’ny 2.00 maraina. Ny an’ny sasany indray amin’ny 5.00 maraina. Anankiray ihany no niteny hoe amin’ny 9.30 alina.”
Inona no mety hahatonga an’ilay olana?
Namana. “Betsaka ny zavatra mety hahatonga anao tsy hatory aloha, na ho lanilany fotoana amin’ny zavatra tsisy dikany. Rehefa ilay tafaraka amin’ny namana, amin’ny andro harivariva, iny ianao no tena tratran’izany.”—Pamela.
Zavatra tsy maintsy atao. “Izaho aloha tena tia matory e! Tsy mety ampy torimaso anefa aho satria be atao loatra.”—Ana.
Fitaovana elektronika. “Ny telefaoniko no tena olana. Te hijery an’ilay izy foana aho rehefa eo am-pandriana.”—Anisa.
Ataovy zava-dehibe aminao ny torimaso. Milaza ny Baiboly hoe: “Aleo fialan-tsasatra eran-tanan’ila, toy izay asa mafy eran-tanan-droa nefa toy ny misambo-drivotra fotsiny.” (Mpitoriteny 4:6) Tsy hoe zavatra mahafinaritra fotsiny ny hoe matory fa tena ilaina. Tsy ho vitanao tsara izay zavatra ataonao, raha tsy ampy torimaso ianao. Na ny fialam-boly ataonao aza tsy tena hankafizinao.
Jereo hoe inona no tena mahatonga anao tsy ho ampy torimaso. Tia miaraka amin’ny namanao ve ianao, dia alina be vao mody? Be loatra ve ny devoara sy ny raharaha tsy maintsy ataonao? Variana mampiasa telefaonina ve ianao nefa efa tokony hatory? Sa manapaka ny torimasonao ilay izy?
Eritrereto izao: Mila ezaka be ilay hoe manova ny zavatra efa mahazatra anao. Tsy ho very maina anefa ny ezaka ataonao. Hoy ny Ohabolana 21:5: “Ahazoan-tombony ny fandaminana mialoha ataon’ny mazoto.”
Tadidio koa anefa hoe tsy voatery hitovy ny zavatra mety amin’ny tsirairay. Misy, ohatra, miteny hoe mahita tory tsara izy amin’ny alina, rehefa matory kely amin’ny antoandro. Mifanohitra amin’izany indray anefa ny an’ny hafa. Jereo àry hoe inona no tena mety aminao. Afaka manampy anao ireto torohevitra ireto:
Makà aina tsara alohan’ny hatory. Vetivety ianao dia hahita tory amin’izay.
“Tokony hovitainao aloha kokoa ny raharahanao sy ny zavatra hafa mila ataonao, amin’izay ianao tsy hiasa saina amin’ilay izy intsony rehefa hatory.”—Maria.
Amboary ny fandaharam-potoananao. Na dia misy zavatra mitranga tampoka aza, dia ataovy foana izay hahatonga anao ho ampy torimaso.
“Mila matory adiny valo aho, fara fahakeliny, isan’alina. Raha mila mifoha aloha kokoa àry aho, dia jereko hoe amin’ny firy aho izany no mila matory mba ho feno foana ilay adiny valo.”—Vincent.
Aza ovaovana ny ora fatorianao. Ho zatra an’izay ny vatanao rehefa mandeha ny fotoana. Milaza ny manam-pahaizana fa tsy tokony hiovaova ny ora atorianao sy ny ora ifohazanao. Ahoana raha andramana izany mandritra ny iray volana? Ho hitanao hoe tena tsara ny vokany.
“Raha tsy ovaovanao ny ora fatorianao, dia hisokatra tsara ny sainao ny ampitso. Ho vitanao tsara izay zavatra ataonao amin’izay.”—Jared.
Mahaiza mandanjalanja rehefa miaraka amin’ny namana. Milaza ny Baiboly fa tokony ‘hahay handanjalanja’ isika ‘eo amin’izay zavatra fanaontsika’, anisan’izany ny fialam-boly.—1 Timoty 3:2, 11.
“Tsy maintsy noferako ny fotoana niarahako tamin’ny namako rehefa hariva. Lasa tsy ampy torimaso foana mantsy aho rehefa tsy manao an’izany.”—Rebecca.
Mba avelao “hatory” koa ny telefaoninao! Tsy tokony hampiasa Internet na handefa hafatra intsony ianao, fara fahakeliny, adiny iray alohan’ny hatorianao. Mahatonga ny olona tsy hahita tory haingana ny hazavana avy amin’ny telefaonina, tele, na tablette, araka ny lazain’ny manam-pahaizana sasany.
“Tian’ny olona raha afaka miresaka aminao foana izy na amin’ny firy na amin’ny firy. Rehefa fantatrao anefa hoe tsy tokony hampiasa telefaonina intsony ianao, dia aza kitihina intsony ilay izy. Ho ampy torimaso tsara ianao amin’izay.”—Julissa.
“Aza ovaovana mihitsy ny fahazaranao. Raha matory amin’ny ora mitovy foana ianao, dia ho zatra an’izany ny vatanao.”—Bailey.
“Mila mizatra matory aloha ianao. Manavao ny tenany ny vatanao rehefa matory ianao, dia lasa mavitribitrika indray ianao ny ampitso.”—Katie.
“Tsy mora indraindray ilay hoe ianao no mandeha mody voalohany rehefa miaraka amin’ny namanao, satria hoe mila mifoha maraina. Ho vitanao anefa izany raha manetry tena ianao. Ho matotra kokoa ianao amin’izay.”—Lorenzo.
Hizara Hizara Inona no Azoko Atao mba ho Ampy Torimaso Aho?
ijwyp no. 87
Andevozin’ny Fitaovana Elektronika ve Ianao?